2GB OST Nsogbu Faịlụ. Okela OST Nsogbu Faịlụ.
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Na-atụgharị uche OST Nsogbu Faịlụ
Zuru ezu Ozi banyere Oversized OST Nsogbu Faịlụ
Gịnị bụ Oversized OST Nsogbu Njikwa?
Microsoft Outlook 2002 na obere nsụgharị na-amachi oke folda na-anọghị n'ịntanetị (OST) faịlụ na 2GB. Mgbe faịlụ ahụ ruru ma ọ bụ karịa na njedebe ahụ, ị ​​ga-ezute otu ma ọ bụ karịa n'ime njehie ndị a:
Enweghị ike imeghe ma ọ bụ buru ibu OST faịlụ ma ọlị.
Enweghị ike ịgbakwunye data ọhụrụ ọ bụla na OST faịlụ.
Enweghị ike ịmekọrịta ihe ahụ OST faịlụ na Exchange Server.
Hụ ozi njehie dị iche iche n'oge usoro mmekọrịta.
A na-akpọ nke a nnukwu OST nsogbu faịlụ.
Microsoft Outlook na Exchange enweghị ọrụ arụrụ iji napụta ndị buru ibu OST faịlụ. Microsoft weputara otutu ngwugwu oru ka mgbe OST nha faịlụ na-abịaru oke 2GB ahụ, Outlook ga-egosi ụfọdụ ozi njehie ma kwụsị ịnabata data ọhụụ ọ bụla. Usoro a, ruo n'ókè ụfọdụ, nwere ike igbochi OST faịlụ site na ibu. Mana ozugbo oke ruru, ị gaghị enwe ike ịme ihe ọ bụla na OST faịlụ, dị ka izipu / nata ozi ịntanetị, mee nhọpụta, dee ederede, mmekọrịta, wdg, belụsọ na i wepụrụ ọtụtụ data na OST faịlị ma kọwaa ya ma emesịa belata ogo ya karịa ihe na-erughị 2GB. Nke a dị ezigbo nhịahụ mgbe data dị na OST Faịlụ toro ibu na ibu.
Ebe ọ bụ na Microsoft Outlook 2003, ọhụrụ OST A webatara usoro faịlụ, nke na-akwado Unicode ma enweghị oke oke 2GB ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eji Microsoft Outlook 2003 na elu na nsụgharị, na OST Emepụtara faịlị n'ụdị Unicode ọhụrụ, ị chọghị ichegbu onwe gị maka nsogbu ahụ karịrị akarị.
1. Mgbe ị na-agbalị ibu ibu OST faịlụ, ị ga-ahụ njehie ozi, dị ka:
Achọpụtala njehie na faịlụ xxxx.ost. Kwụsị ngwa niile ejiri rụọ ọrụ, ma jiri Ngwaọrụ Mmezi Igbe.
ebe 'xxxx.ost'bụ aha nke OST faịlụ a ga-ebu.
2. Mgbe ị na-agbalị itinye ozi ọhụrụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na OST faịlụ, site na mmekọrịta ma ọ bụ arụmọrụ ndị ọzọ, na n'oge usoro, OST faịlụ ruru ma ọ bụ gafere 2GB, ị ga - ahụ Outlook na - akwụsị ịnabata data ọhụụ ọ bụla na - enweghị mkpesa, ma ọ bụ ị ga - ahụ ozi ezighi ezi, dịka:
Njehie na mmekọrịta mmekọrịta. Na most ikpe, ozi ndị ọzọ dị na mmekọrịta mmekọrịta na ihe ehichapụ Ihe nchekwa.
Dịka e kwuru n'elu, Microsoft enweghị ụzọ na-enye afọ ojuju iji dozie oke OST nsogbu faịlụ. Ihe kachasị mma bụ ngwaahịa anyị DataNumen Exchange Recovery. Ọ nwere ike weghachite ibu OST faịlụ mfe na rụọ ọrụ nke ọma. Iji mee nke a, e nwere ụzọ abụọ ọzọ:
Ọ bụrụ na ị nwere Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị dị elu arụnyere na kọmputa gị, ị nwere ike gbanwee oversized OST faịlụ n'ime faịlụ PST na ụdị unicode Outlook 2003 ọhụrụ, nke na-enweghị njedebe 2GB ọ bụla ọzọ. Nke a bụ usoro kachasị mma.
Ọ bụrụ na ị nwere naanị Outlook 2002 ma ọ bụ ụdị ndị arụnyere, ị nwere ike kewaa okirikiri OST faịlụ n'ime obere faịlụ PST. PST faịlụ ọ bụla nwere akụkụ nke data na nke mbụ OST faịlụ, ma ọ bụ ihe na-erughị 2GB na onwe ha site na ibe ha ka ị nwee ike ịnweta ya iche na Outlook 2002 ma ọ bụ nsụgharị dị ala. Usoro a adighi adighi nma dika ichoro ijikwa otutu faili PST mgbe emechara nkewa. Ma ị ka kwesịrị iche nsogbu isi ọwụwa na-enweghị isi mgbe faịlụ PST ọ bụla ruru 2GB mgbe e mesịrị.